ekipa tovolahin’ny Mb2All Analamanga. Teo amin’ny U 18 zatovovavy dia resin’ny Ascut Atsinanana 72-69 teo amin’ny lalao famaranana omaly alahady 20 oktobra 2019 ny zatovovavin’ny Fandrefiala Analamanga. Ny Mb2All Analamanga zatovovavy nandresy ny Tamifa Amoron’i Mania 72-81 kosa no nitana ny laharana faha-3. Teo amin’ny U 18 zatovolahy kosa, lavon’ny Mb2All tamin’ny 74-60 ny Ascut Atsinanana teo amin’ny famaranana. Nitana ny laharana faha-3 teo amin’ny zatovolahy ny Serasera Vakinankaratra nandavo ny Bcest Atsimo Andrefana 76-54. Ny Telma hatrany no nanolotra an’ireo amboara tamin’ity “Championnat basket U 18” tany Toliara ity.